Maahmaahyadii 24 SOM - Dad shar leh ha ka masayrin, Hana - Bible Gateway
Maahmaahyadii 23Maahmaahyadii 25
Maahmaahyadii 24 Somali Bible (SOM)
24 Dad shar leh ha ka masayrin,
Hana jeclaysan inaad iyaga la joogtid.
2 Waayo, qalbigoodu wuxuu ka fikiraa kharribaad,
Oo bushimahooduna waxay ku hadlaan belaayo.
3 Guri wuxuu ku dhismaa xigmad,
Wuxuuna ku taagnaadaa waxgarasho,
4 Qawladuhuna aqoontay kaga buuxsamaan
Maal kasta oo qaali ah oo qurux badan.
5 Ninkii caqli lahu xoog buu leeyahay,
Oo ninkii aqoon lahuna itaal buu sii korodhsadaa.
6 Waayo, waa inaad talo wanaagsan ku dagaallantaa,
Oo waxaa taliyayaal badan la jirta nabadgelyo.
7 Xigmaddu nacaska way ka dheer tahay,
Isagu xagga iridda afkiisa kuma kala qaado.
8 Kii ku fikira inuu xumaan sameeyo,
Waxaa loogu yeedhi doonaa belaayo-sameeye.
9 Fikirka nacasnimadu waa dembi,
Kii wax quudhsadaana waa u karaahiyo dadka.
10 Maalinta dhibaatada haddaad liicdid,
Itaalkaagu waa yar yahay.
11 Samatabbixi kuwa dhimashada loo wadayo,
Kuwa ku dhow in la gowracona dib uga qabo.
12 Haddaad tidhaahdid, Bal eeg, waxan ma aannu garanayn,
Kan qalbiyada miisaamaa miyaanu ka fiirsanayn?
Oo kan naftaada dhawraa miyaanu ogayn?
Oo miyaanu isagu nin walba ugu abaalgudayn sida shuqulkiisu yahay?
13 Wiilkaygiiyow, malab cun, waayo, wuu wanaagsan yahay,
Oo waxaad cuntaa awlallada malabka, taas oo kuu dhadhan macaan.
14 Oo xigmadda aqoonteeduna sidaasoo kalay naftaada u ahaan doontaa,
Oo haddaad iyada heshid waxaa jiri doona abaalgud,
Oo rajadaaduna ma go'i doonto.
15 Sida nin shar leh, ha u gabban kan xaqa ah gurigiisa,
Oo rugtiisa nasashadana ha kharribin.
16 Waayo, nin xaq ahu toddoba goor buu dhacaa, wuuna soo sara kacaa haddana,
Laakiinse kuwa sharka leh waxaa lagu afgembiyaa belaayo.
17 Ha rayrayn markuu cadowgaagu dhaco,
Oo qalbigaaguna yaanu farxin markuu turunturoodo,
18 Waayo, waaba intaas oo Rabbigu taas arkaa, oo ay shar la ahaato indhihiisa,
Oo uu dabadeedna cadhadiisa ka soo celiyaa isaga.
19 Xumaanfalayaasha aawadood ha isku dhibin,
Kuwa sharka lehna ha ka masayrin,
20 Waayo, kii shar leh abaalgud ma heli doono,
Oo laambadda xumaanfalayaashana waa la bakhtiin doonaa.
21 Wiilkaygiiyow, Rabbiga iyo boqorkaba ka cabso,
Oo ha ku darsamin kuwa isrogrog badan,
22 Waayo, belaayadoodu si degdeg ah ayay u soo kici doontaa,
Oo bal yaa yaqaan baabbi'inta labadoodaba?
Erayada Kale Oo Kuwa Caqliga Leh
23 Oo weliba waxyaalahanuna waa wixii ay kuwa caqliga lahaa yidhaahdeen.
In dadka garsooridda loogu kala eexdaa ma wanaagsana.
24 Kii kan shar leh ku yidhaahda, Xaq baad tahay,
Dadyowga ayaa habaari doona, oo quruumuhuna way karhi doonaan isaga,
25 Laakiinse kuwii isaga canaantaa farxad bay yeelan doonaan,
Oo dushoodana waxaa ku soo degi doonta barako wanaagsan.
26 Kii jawaab qumman ku jawaabaa
27 Shuqulkaaga dibadda ku hagaajiso,
Oo beerta ku diyaarso,
Oo dabadeedna gurigaaga dhiso.
28 Deriskaaga sababla'aan markhaati ha ku furin,
Oo bushimahaagana ha ku khiyaanayn.
29 Hana odhan, Wixii uu igu sameeyey oo kale ayaan ku samayn doonaa,
Oo ninkii sidii shuqulkiisu ahaa ayaan u abaalmarin doonaa.
30 Waxaan ag maray ninka caajiska ah beertiisa,
Iyo ninka garaadka daran beercanabkiisa,
31 Oo bal eeg, kulligood waxaa ka baxay qodxan,
Oo dhammaantoodna waxaa qariyey maraboob,
Oo derbigoodii dhagaxa ahaana waa dumay.
32 Markaasaan eegay oo aad uga fiirsaday,
Waan fiiriyey oo wax ka bartay.
33 Weliba in yar baad seexanaysaa, oo in yar baad gam'aysaa,
Oo in yar baad gacmaha hurdo u laabaysaa,
34 Haddaba caydhnimo waa kuu iman doontaa sida tuug oo kale,
Oo baahina sida nin hub sita oo kale.